युवतीको छाती छुन डाक्टर लजाउँदा स्टेथोस्कोपको आविष्कार भएको थियो – Wire Nepal
युवतीको छाती छुन डाक्टर लजाउँदा स्टेथोस्कोपको आविष्कार भएको थियो
अक्सर लजाउने अथवा अप्ठ्यारो महशुस गर्ने बानीले जीवनको दौडमा मान्छे पछि पर्छ भनिन्छ। तर, यो कुराले तपाईं अचम्ममा पर्न सक्नुहुन्छ कि एक डाक्टर लजाउँदा स्टेथोस्कोपको अविष्कार भएको थियो । जुन अहिले चिकित्सा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण औजार बनेको छ । चिकित्सा बिज्ञानमा यसलाई ठूलो अविष्कारका रुपमा पनि लिइन्छ।
कसले गरे त यसको अविष्कार?
फ्रान्सका बैज्ञानिक रेने थियोफाइल हायसेनिक लिनेकले बनाएका थिए यो। उनले यो बनाउनुका पछाडि एउटा गज्जबको कहानी छ।
सन् १९८७ मा फ्रान्समा भएका थियो यी डाक्टरको जन्म । उनले मेडिकल क्षेत्रको पढाइ आफ्नै काकाको रेखदेखमा गरे। त्यसपछि उनलाई फ्रान्सको क्रान्तिमा मेडिकल युनिटका रुपमा सहभागी हुन बोलाइयो। यसरी बिचमै रोकिएको आफ्नाृ पढाइ उनले १८०१ मा फेर सुरु गरे । सन् १८१५ मा शाही सत्ता स्थापित भएपछि उनी नेककर नामक हस्पिटलमा काम गर्न थाले।
PREVIOUS POST Previous post: मानिसहरु किन घुर्छन्, के हुन्छ खतरा ? उपचार कसरी गर्ने ?
NEXT POST Next post: रगत र रक्तदान : जान्नुस् यी १२ तथ्य